🥇 ▷ Iminka waa la heli karaa si loo keydiyo xaddiga xaddidan ee Razer of Gears 5 ✅
Iminka waa la heli karaa si loo keydiyo xaddiga xaddidan ee Razer of Gears 5
Sidaan kuu sheegnay bishii hore, astaanta teknolojiyadda weyn Razer Waxaan qorsheynayay inaan iibiyo khadka wax soo saar ee ku saleysan Gears 5. Tan waxaa loo qaybin doonaa isugeynta Xbox One iyo sidoo kale PC, dhammaantoodna waxay salka ku hayaan ciyaarta la filayo ee Isbahaysiga. Markii ugu horreysay oo aan si adag oo adag uga hadalnay taleefanka gacmeedyada gaarka loo leeyahay Xbox One Razer Thresher imikana, ka dib imaatinka nooc kasta oo suuqa ah ka hor iibinta bisha Sebtember 5, shirkaddu waxay na siisaa fursado cusub oo aan kula ciyaarno qaab ahaan iyo gaar ahaan tayo ahaan.
Ka biloowga dariskeena Xbox One, tani waxay leedahay gogolkii ugu horreeyay ee ay abuurtay nooc ka mid ah jiirka iyo keyboard la-waafajin karo qalabka loo yaqaan ‘console’ iyo qalabka dhegaha-kor lagu soo xusay:
Razer Turret Gears Edition 5 ee Xbox One: Qayb gaar ah oo bilaa wireless ah oo ay ka mid yihiin jiirka, keyboard-ka iyo xabagta jiirka lagu dhex dhisay. Dhammaan iyaga oo taabanaya taabashada ciyaarta iyo sidoo kale hadiyad sida DLC Lanzer Skin iyo Mark.
Razer Thresher Gears Edition 5 ee Xbox One: Qaar ka mid ah sameecadaha dhagaha waaweyn ee wireless-ka ee si toos ah ugu xira qalabka mashiinka kumbuyuutarka oo aan lahayn xayiraad mahadsanid Windows Sonic Waxa kale oo ku jira sida DLC Lanzer Skin iyo Mark.
Ciyaartoyda PC Dabcan Razer Ha iloobin iyaga, oo waxaad ku sii wadataa xariijin khaas ah oo ah keyboard, linje, iyo mega mat:
Razer Huntsman Edition Gears 5: Keyboard muuqaal qurux badan oo indho qabad leh laakiin xitaa si ka sii badan oo gudaha ah oo leh wareegyo na siin doona wax qabad aad u wanaagsan. Tan waxaa ku jira sida Dhiig-baxa Dhiiga iyo Baananka.
Razer Mimba Wirless Edition Gears 5: Jiirka A wireless oo leh batari cimri dhererkiisu yahay 50 saacadood ugu badnaan ciyaartooyda. Waxaa sidoo kale ku jira Dhiig-baxa Dhirta iyo Baananka sida DLC.
Razer Goliathus Extended Chroma Edition Gears 5: Sida magacu u muuqdo, waa sagxad weyn oo dheereysa, waxaana ku jira nalka ka yimid Razer Chroma RGB. Waxaa ku jira DLC lamid ah alaabada ay soo saartay.
Dhammaan alaabooyinkan hadda waa la keydin karaa isla markaana, si aan mugdi ku jirin, waxaan kaaga tageynaa falanqaynta Gears 5.